Waa Tan Sababta Trump Uusan U Qaadan Mobeelka Gacanta | Xaqiiqonews
Waa Tan Sababta Trump Uusan U Qaadan Mobeelka Gacanta
Donald Trump ayaa gaashaanka u daruuray warbixino ay qoreen Warbaahinta qaarkeed oo ku saabsaneyd in uu wili isticmaalo taleefoonka gacanta.
Trump ayaa Tuwiterkiisa ku soo qoray “CNN wili waxa ay qorayaan wararka been abuur ah oo ay leeyihiin Trump wili waxa uu isticmaalaa mobeelka gacanta, macluumaadkaasi waa been aan waxba ka jirin”.
Trump ayaa intaasi raaciyey “muddo sanado ah ma isticmaalin waxa taleefoon gacanta ah, waxa aan isticmaalaa oo kaliya taleefoonada dowladda leedahay” waxa uuna dalbaday in CNN-ka uu ka laabto wararkaasi dacaayadda ah.
CNN-ka oo soo xiganaya mas’uulyiin iyo sirdoono dowladda ah ayaa shaaciyey in Trump uu wili isticmaalo taleefoonkiisii gacanta ee uu wadan jiray ka hor inta uusan Madaxweyne noqon.
Telifishinka ayaa sheegay in Trump uu iska dhaga tiray digniinada loo soo jeedinaya ee ku aaddan halista talefoonada gacanta, oo ay dhici karto in la dhageysto.
Wargeyska New york Times ayaa horay Trump ugu eedeeyey in uu isticmaalo taleefoonka gacanta ee noociisu yahay Iphon. wargeyska ayaana tilmaamay in jawaasiista shiinuhu dhageysan karaan taleefonada noocaas ah.